LOZA MITATAO : Trano sy tanànan’olona ahiana harodan’ny lavaka nangadiana fasika
Misy mitrandraka fasika efa am-bolana maro ao Petite plage ao. 14 janvier 2020
Avy ao Madirokely sy ao aorian’ny Hotel holidays no idiran’ireo fiarabe mankany. Matsabory ao ambadiky ny Homeopharma iny no akan’izy ireo fasika.
Efa lavaka be ny ao saingy mbola mitohy hatrany ny fitrandrahana. Efa anaty rano tanteraka ireo olona no maka fasika nefa mbola mitohy hatrany. Loza mitatao ho an’ireo tanàna sy trano manodidina io fitrandrahana fasika io satria ny fasika dia migorisa, ka rehefa lavaka be ny eo akaiky dia lasa any ny fasika avy amin’ny tanànan’ olona hafa. Volabe ho an’ireo mpitrandraka fasika izy io satria vidian’ireo fiarabe 50 000Ariary ny fasika iray fiarabe. Ireo fiarabe kosa mivarotra 200 000Ariary amin’ireo mitady izany. Mitaraina ireo mponina saingy tsy misy mihaino. Volabe rahateo ka mivarotra ny fasika ao aminy ny tompon’ny tany.
Toy izay koa ny eny Grand pavois, tractopelle iray no maka fasika eny amin’ny torapasi-dranomasina hanotofany ny lavaka be ao anaty lakorony. Gaga ireo fokonolona ka nanontany ireo mpaka fasika. Namaly moa ireto farany fa nahazo fahazoan-dalana.
Tokony hojerena tsara ihany ny fanomezan-dalana hitrandraka fasika satria manimba ny tanànan’olona hafa sy ny fananana iombonana izy ireo. Potika tanteraka ny tontolo iainana. Ao Petite plage ao ohatra dia angalarin’ireo mpivarotra fasika ny fasika eo an-tokotanin’olona.
Nangadian’izy ireo ny fasika tao ka lasa cheminée ilay vovon-drano izay nilentika tao anaty tany, noho ny halalin’ny lavaka nakana fako. Ny tranon’olona moa dia lasa nitongilana. Ireo tanin’olona tsy mipetraka eto Mahajanga no tena lasibatra matetika ka tokony hanara-maso tsara ireo mpanome fahazoan-dalana mialoha ny hanomezana izany ary homena sazy henjana kosa ireo mpangalatra fasika rehefa tratra.